Waxaad ka heli kartaa faahfaahinta xidhiidhka xirfad yaqaanada caafimaad hoos. Waxaad ku kala sooci kartaa xidhiidhada mowduuc ahaan.
Adeega caafimaadka degmadda ee dad waynaha
Eray soo gaabinta Dhajka ah ee GGD waxay u taagantahay Degmadda ama Adeega Caafimaadka Wada jirka ah Netherlands waxay u kala qaybsan tahay gobolo kala duwan oo gobol kastaa waxaa daboola adeega caafimaadka degmadda ee dad waynaha. Adeega caafimaadka degmadda ee dad waynaha waxa uu xooga saaraa caafimaadka dad waynaha ee mujtamaca, Waxaad tegi kartaa halkaas si ilmahaaga loo tlalaalo, wixii tallaalo ah, ee marka aad u safrayso wadan kale, ama haddii aad doonayso in lagaa baadho cudurada STI.
Caawimada xaalada nolosha halis gelinaysa
Daryeelka ilma korinta
Daryeelka ilma korinto waa doorasho haddii (si ku meel gaadh ah) aanad awoodin inaad daryeesho ilmahaaga.
Daryeelka iyo taageerada muddada uurka
Isla marka aad ogaato inaad uur leedahay, waxaad ballan la samaysan kartaa ummulisada aagaaga. Ummulisadu waxay taageertaa oo la talisaa adiga muddada uurkaaga, ummulida iyo muddada islamarkaa aad ummusho. Ummulisadu sidoo kale waxay talo ka bixin kartaa kiniinka ka hortaga uurka.
Dhalin yar oo uur leh
Haddii aad uur leedahay ama aad dhashay ilmo, oo aad ka yartahay 23, waxaad halkan u tegi kartaa caawimo.
Haddii aanad si dabiici ah u uuraysan karin, waxaad la xidhiidhi kartaa xarunta dhalmo la'aanta.
Haddii uurku si kedis ah u soo af jarmo saddexda bilood ee u horeeya uurkaaga, waxaad leedahay dhicisaynta ilmaha. La xidhiidh ummulisadaada ama dhakhtarka guud haddii ay tani dhacdo.